देशमा कयौ क्रान्तीहरु भए, क्रान्तीकै जगमा टेकेर व्यवस्था परिवर्तन भयो । लोकतन्त्र,गणतन्त्र हुदै देशमा संघियता आयो । क्रान्ती गर्नेहरु सत्तामा आए । देशमा तीन तहको सरकार आयो । क्रान्ती गर्ने बेला देखि केषि क्रान्ती गर्ने भन्नेहरुको नीतिमा त कृषि क्रान्ती आयो तर व्यवहारमा कहिले आए । नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्रान्तीका कुरा गरे पनि त्यसको लाभ कृषकले लिन सकेन भन्दा पनि सरकारले दिन चाहेन । दिनेहरु नियतले दिएन । कृषि प्रधान देश भनिए पनि कृषिलाई प्राथमिकतामा राखिएन । संघ वा प्रदेश सरकार नीतिमा कृषि क्रान्तीका कुरा गरे पनि कृषक सधे पिडित नै भए ।
रोपाई गर्ने बेलामा मल विउमा लफडा, धान फल्यो मुल्यमा लफडा, मकै रोप्यो व्यापारीको मनोमनी उचित मूल्यको अभाव, तरकारीमा पनि विचौलीयाको मनोमनी । कृषिमा गरेको लगानी पनि उठाउन नसक्ने भएपछि कसरी हुने हो कृषिमा क्रान्ती ? सधै किसानलाई समस्या भईरहने तर विचौलीया र व्यवसायी मोटाईरहने यस्तो छ यहाँको चलन । खेती गर्ने पनि उही पुरानो तरिका । नयाँ प्रविधि भनौ वा जे भनौ जनताका लागि ट्र्याक्टर एउटा साथी बनेको छ । त्यसमा पनि गरिबलाई राहत भन्दा पनि धनिका लागि कमाई खाने धन्धा ।
अहिले देशमा तीन तहको सरकार छ । सरकारहरुको नीतिमा त कृषि क्रान्तीका कुरा हुन्छ तर व्यवहारमा हुदैन । व्यवस्था परिवर्तन त भयो तर नीतिमा भएका कुराहरु व्यवहार देखिएन । व्यवस्था परिवर्तन होस अरु कुनै आन्दोलन, कुनै कार्यक्रमको भाषण होस वा मन्त्रीको पदभार ग्रहण भाषणमा क्रान्तीको कुरा नहुने कुरै छैन तर बजेट छुट्याउने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने बेलामा अनेको समस्या देखाईन्छ र कार्यान्वयन रोकिन्छ । तराइमा धान, गहु, मकैको खेती गरेर देश भरी अनाज पु¥याउने काम हुन्छ । तराई मधेशलाई अन्नको भण्डार भनेर पढदै आईरहेका छौ ।
हामीले पढने बेला देखि नै स्ुन्दै आएको यो कुरा अहिले पनि परिवर्तन भएको छैन । हुन त यो भनाई मात्र परिवर्तन नभएको होईन यो खेती शैली पनि परिवर्तन भएको छैन । पानी पर्ने समयमा धान लगाउने, काटने बेच्ने र साहुनको पैसा तिर्ने । बर्षमा दुई बाली मात्र लगाउने परम्परा अहिले पनि गएको छैन । परम्परा नगएको भन्दा पनि कृषिलाई आधुनिकिकरण गरिएन । किसानका लागि क्रान्ती भएन । सवैको लागि आधुनिकता आयो तर किसानका लागि आएन । बर्षको आधा दिन बाझो रहने जमिनका लागि कुनै पनि सरकारले सोचेन । असार १५ मा हलो जोत्नेहरु फर्केर कहिले पनि खेतमा गएनन ।
वर्षमा एक पटक फोटो खिचाउनका लागि हलो समात्नेहरु किसानका हात समातेन्न । किसानले उब्जाएको ताजा तरकारी मन पराउनेहरु किसानको समस्याको बारेमा कहिले ताजा बहश गरेनन अनि कसरी हुन्छ कृषिमा क्रान्ती ? कसरी हुन्छ किसानको पीडा कम ? अहिले कोभिड १९ को संक्रमणका बेला सवै उधोग धन्धाहरु बन्द भएका छन । बिदेशमा आफनो भविष्य उज्वल देख्नेहरु नेपालको भूमिमा आउनका लागि छटपटाईरहेका छन भने छिमेकी मुलुकमा गएकाहरु लामो संघर्ष गर्दै स्वदेश फर्केका छन ।
सवै कुरा बन्दा हु्दाँ सवैको आशाको केन्द्र बनेको छ कृषि । एउटा गमलामा भए पनि तरकारी रोप्नेहरु ठुलै काम गरेको झै सामाजिक संजालमा पोष्ट गरिरहेका छन । बाहिरबाट आएकाहरु पनि अव खेतीकिसानी गरेर भए पनि खाने तर बाहिर नजाने भनिरहेका छन । संघ देखि स्थानीय सम्म पनि कृषि क्रान्तीका चर्चाहरु चलिरहेका छन । कृषि प्रधान देशमा कृषिको चर्चा हुनु सुखद कुरा भए पनि चर्चामा आए जस्तो बजेट आएन । नारा त आयो तर कार्यक्रम आएन अनि कसरी हुन्छ कृषिमा क्रान्ती । अहिले अवस्थाामा पनि असारे विकास शुरु भएको छ ।
सडकमा माटो पुरी ग्रेवल गर्ने, प्रवेश द्धवार बनाउने र एक महिना भित्र बजेट सिध्याउने ? अहिले अवस्थामा खोई त धानको विउ वितरण गरेको ? खोई राहतमा मल खाद उपलब्ध गराएको ? संघिय सरकारले बजेट ल्याई सकेको छ भने प्रदेश सरकारहरुको आउने प्रकृयामा छ । स्थानीय सरकाहरुले भने कागजी रुपमा मिलाउने प्रकृयामा छन । संघिय सरकारले कृषमा ल्याएको कार्यक्रम प्रति स्वयम कृषि मन्त्री नै असन्तुष्ट रहेको कुरा बाहिर आईसकेकोले यसमा धेरै चर्चा नै गर्नु परेन ।
हुन त स्थानीय सरकारले मात्र के नै गर्न सक्छ र । सबैको आशा स्थानीय सरकारमा हुन्छ तर बजेट भने संघिय सरकारमा । वास्तमा अहिलेको अवस्थामा कृषिमा क्रान्ती गर्न चाहेको भए सम्भव पनि थियो किन भने हामीलाई चाहिने जनशतिmको अभाव अहिले छैन न त बजार नै नपाउने समस्या । नीतिमा कृषिका कुरा गर्ने तर व्यवहारमा गिटटी र बालुवाका कुरा गर्नेहको ध्यान यस तर्फ जाओस । कागजमा भन्दा पनि व्यवहारमा कृषि क्रान्ती होस् ।
गर्व गर्न लायक कहिले होला हाम्रो प्रदेश ?
प्रदेश नं. २ जहिले पनि पछडी रहने प्रदेशको रुपमा चिनिन्छ जस्तै, शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाई, प्रति व्यतिm आम्दानी आदी ईत्यादीमा तर यो कोरोना भने अगाडी देखियो । कोरोना संक्रमणमा अगाडी देखिए पनि यसको रोकथाम तथा तयारी भने पछाडी नै । प्रदेश नं. २ मा तयार गरिएका क्वारेनटिनको अवस्था हेर्दा कोरोना उत्पादन गर्ने कारखाना जस्तो देखिन्छ ।